Maitiro ekuita shanduko kubva kuMS Office kuenda kuLibreOffice nyore | Kubva kuLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Yakurudzirwa
Hofisi suite chishandiso chakakosha mune chero nzira yekufambisa kuenda kune imwe inoshanda system, kwete chete munzvimbo yebasa asiwo kune vashandisi vekumba. Ichi hachisi chakavanzika, mubvunzo wakajairika munhu anonzwa kana achikurudzira kune mumwe munhu mukana wekuchinjira kuGNU / Linux ndewekuti: "Ndichakwanisa kuvhura iyo MS Office faira?" Chaizvoizvo nekuda kwechikonzero ichi, kukosha kushoma kwatinoisa kune hofisi suite muGNU / Linux inoramba ichindidhonzera pfungwa. Mune mamwe mazwi, ndinotenda kuti kuitira GNU / Linux kunyatso shandiswa uye kukunda musika wecomputer wemakomputa kamwechete uye zvachose, hapana chikonzero chemberi vhidhiyo mupepeti kana mupepeti wedhiragi izvo chaizvo zviri padanho. ye Photoshop, kwete kunyange rig yemitambo seSteam. Zvese zvinotora kuita kuti shanduko ive nyore.
Kuwana fekitori yeGNU / Linux yakaiswa pane mamwe makomputa zvirokwazvo inhanho munzira kwayo, asi irwo rubatsiro rungadaro kana, semuenzaniso, hofisi suite isingakutenderi kuti uvhure mafaera ari kushandwa nevanhu? Neichi chikonzero, chimwe chezvinhu zvandinokurudzira kune vanhu vanoda kuyedza GNU / Linux kutanga kutanga mahara maapplication esoftware ayo anoshandawo paWindows. Nenzira iyoyo, shanduko iri nyore. Saka, semuenzaniso, ini ndinoisa LibreOffice, VLC, GIMP uye Firefox, pakati pevamwe, kuitira kuti vajairire chimiro chayo uye kushanda kwakawanda.
Iyo chaiyo nyaya yeLibreOffice iri, sezvandambotaura, inonyanya kukosha uye haina pasina matambudziko. Iyi mini-gwara inovavarira kubatsira avo vari kuda kuyedza hofisi suite iyi kuti vagone kuita sarudzo ine ruzivo, uye kuti vazive zvakanakira nekuipira kushandisa chirongwa ichi.
1 Nei uchinjira kuLibreOffice?
2 Ndeapi matambudziko andingatarisana nawo kana ndikafunga kutama?
2.1 Rutsigiro rwefaira haruna kukwana
2.2 Macros haashande
2.3 Haugone kugadzirisa zvinyorwa pamwe chete
2.4 Kushaya kwekushanda kana zvikanganiso (bugs)
3 Imwe mibvunzo
3.1 Dzidza zvakaenzana
3.2 Kufambisa protocol kuenda kuLibreOffice
3.3 Isa Microsoft Fonti
Nei uchinjira kuLibreOffice?
Zvakasununguka. Kusiyana neMS Office, hapana chikonzero chekubhadhara mari hombe kukwanisa kuishandisa. Kunyangwe izvi mukati uye pachezvazvo chichigona kuve chikonzero chinogombedzera kune mumwe mushandisi, zvine simba rakakura pamabhizimusi madiki nepakati, ayo anowanzo shandisa kopi imwe chete yeoffice software pane imwe neimwe yemabhizinesi emakomputa. Vanhu vazhinji, kunyangwe mamwe makambani kana Nyika (sic) pachayo, vanosarudza kudzivirira dambudziko iri nekushandisa makopi epirisiti eMS Office, zvine njodzi yekuchengetedza izvo zvinoreva izvi. LibreOffice, kune rimwe divi, ndeimwe yemahara uye yakachengeteka imwe nzira.
Iyo yemahara software. Kufanana nesoftware yese yemahara, LibreOffice inogamuchira kuenderera mberi kunatsiridzwa, iyo inokanganisa zvakananga kuchengetedzeka uye kugadzikana kwechirongwa. Uye zvakare, LibreOffice ine imwe yenzvimbo dzinoshanda zvakanyanya, iyo inoshanda zvachose pakuiswa kweanoshanda matsva uye kururamisa kwemakanganiso.
Shandisa mafomu emahara: Kusiyana neDOC, WPD, XLS kana RTF, ayo akavharwa mafomati ayo chete vagadziri vavo anonyatso ziva kwazvo, LibreOffice inoshandisa iyo ODF yemahara fomati, iyo yakave iyo International standard ISO 26300: 2006. Ichokwadi chekushandisa yakavhurika uye yakajairwa fomati inodzivirira kufefeterwa kwemagwaro ako uye inobvumira kuti ivhurwe mune ramangwana.
Iyo yakawanda-chikuva: Kune shanduro dzeLibreOffice yeWindows, Mac neLinux. Izvi zvinoita kuti shanduko ive nyore, kunyanya kana ukasashandisa imwechete yekushandisa system kumba uye kubasa, semuenzaniso.
Iwe haudi iyo MS Office ribhoni interface. Vazhinji vashandisi vanosarudza kusiya MS Office nekuti ivo havana kukwanisa kuenderana neiyo ribhoni interface. LibreOffice, kune rumwe rutivi, ine "classic" inoonekwa interface, iyo inofambisa shanduko kune avo vanoshandiswa kune yekare MS Office interface.
Ndeapi matambudziko andingatarisana nawo kana ndikafunga kutama?
Isu tatoona zvikonzero zvekuyambuka. Nekudaro, sekune chero nzira yekutama, matambudziko anogona kumuka. Ngatitarisei pane mamwe akajairika.
Rutsigiro rwefaira haruna kukwana
LibreOffice uye MS Office havashandise iwo akafanana mafomati emafaira avo nekutadza. Sezvataona, LibreOffice inoshandisa ODF. Kune avo chikamu, shanduro dzekare dzeMS Office dzinoshandisa fomati yakavharwa (DOC, XLS, nezvimwewo) inongozivikanwa neMicrosoft zvakadzama. Kubva muna 2007, MS Office inoshandisa OpenXML nekutadza, inozivikanwawo se OOXML (DOCX, XLSX, nezvimwewo). Kusiyana nemhando yapfuura, izvi zvinogona kutaridzwa semhando yakavhurika (senge ODF) uye yakwanisa kuve muyero wepasi rose ISO / IEC 29500.
Kunyangwe hazvo shanduro dzazvino dzeLibreOffice uye MS Office ichiunza kuenderana kwemafomati ese-uye mamwe akawanda- chokwadi ndechekuti ivo havana kukwana, izvo zvinowanzoita kuti mafaera asatarise zvakafanana muchirongwa chimwe uye chimwe. Izvi, hongu, zvakakomba zvakanyanya mune nyaya yeLibreOffice, nekuti isinganyanyo shandiswa pane MS Office. Neichi chikonzero, ivo vashandisi veLibreOffice vanozofanirwa kuchinjika kune akakosha mafomati, kana izvi zvikadzivirirwa, hongu.
Sei kudzikisira dambudziko iri?
Zvakanaka, chinhu chakakosha apa kuona kuti mafaera ari kubvunzwa anofanirwa kugadziriswa gare gare kana kwete.
Muchiitiko chekugadzirisa chisina kudikanwa, saka mhinduro iri nyore kwazvo. Zvakanakisa kuburitsa gwaro kuenda kuPDF uye kugovana iyi faira pane yekutanga. Izvi ndezvechokwadi zvese kumafaira eMS Office (DOC, DOCX, XLS, XLSX, nezvimwewo) uye emafaira eLibreOffice (ODF), nekuti kunyangwe ichokwadi kuti rutsigiro urwo LibreOffice inosanganisa magwaro eMS Office harina kukwana, ingori shanduro nyowani yeMS Office inosanganisira ODF rutsigiro, uye imwe yakaipa yakaipa uye yakaderera rutsigiro. Nekugovana faira iri muPDF fomati, kune rumwe rutivi, tichava nechokwadi chekuti avo vanovhura iyo faira vanokwanisa kuiona seyakagadzirwa. Izvo zvakakodzera kuti utaure kuti LibreOffice inosanganisira mukana wekushandura gwaro kuita PDF pasina chikonzero chekuisa chero yekuwedzera kana yekuwedzera package. Iwe unofanirwa kuenda ku Faira> Export sePDF. Vashandisi vanoshuvira kudaro vanogona zvakare kumisikidza nhevedzano yesarudzo yekugadzirisa zvakataurwa kunze kwenyika, izvo nenzira ndeimwe yepamusoro-soro yandakaona mune iyi hofisi suite.
Kana iko kugadzirisa kwefaira kunofanira kugoverwa kuchidikanwa, saka hapana mhinduro dzakakwana, kunyangwe paine mamwe mazano aunofanira kufunga nezvazvo. Chekutanga uye chakakosha kuchengetedza mafaira aya muMS Office 97/2000 / XP / 2003 fomati. Mune ruzivo rwangu rwakareba ndichishandisa LibreOffice, uye pamberi peOpenOffice, ndinogona kutaura zvakachengeteka kuti mafaira eDOC mafomati ari (anenge) anogara achitsigirwa zvirinani kupfuura maDOCX mafaera. Izvi zvinogona kutaurwa kumafaira eXLS uye mafaera eXLSX, nezvimwe. Kune rimwe divi, kunyangwe zvichingogara zvichishandiswa kushandisa mafomati emahara, MS Office inosanganisira yakasarudzika ODF faira rutsigiro. Mukupedzisa, zvinosuwisa, mhinduro yakanakisa ndeyekuchengetedza iyo faira mune yekare MS Office fomati. Izvi, kubva pakuona kwangu, kupokana kukuru kubvira LibreOffice inosanganisira rutsigiro rwuri nani rwevamiriri veMS Office fomati, pane iyo yakavhurika OOXML fomati. Asi hesi, ndicho chokwadi chinosuruvarisa.
Kune rimwe divi, sezvo LibreOffice ichichengetedza mafaera muODF fomati nekukasira, pese patinochengeta faira neimwe fomati tinowana chikwangwani chinotinyevera kumatambudziko anoenderana. Kana izvi zvikagumbura uye uchida kugara uchichengeta muMS Office 97/2000 / XP / 2003 fomati, zvinokwanisika kushandura maitiro aya nekuenda ku Zvishandiso> Sarudzo uye ipapo Mutoro / Sevha> General. Ikoko iwe unofanirwa kumaka bhokisi Ndivise kana ndisingachengete muODD fomati and in Nguva dzose ponesa se sarudza MS Office 97/2000 / XP / 2003, sekuonekwa mune iyo skrini iripazasi.
LibreOffice inosanganisira rutsigiro rweMacros, asi izvi zvinochengetwa uchishandisa mutauro wakasiyana neMS Office. LibreOffice inoshandisa mutauro unonzi LO-Basic, nepo MS Office ichishandisa yakadzikiswa vhezheni yeVisual Basic yakanyatsogadzirirwa maapplication, inozivikanwa seVBA. Kunyangwe mitauro iyi iri miviri yakafanana, ine misiyano uye haienderane. Senge dai izvi zvaive zvisina kukwana, LibreOffice inosanganisira yakanyanya rutsigiro rweVBA, uye MS Office haisanganisi chero rutsigiro rweLO-Basic. Izvi zvinoreva kuti macros akanyorwa muMS Office kashoma kumhanya mushe muLibreOffice, uye zvinopesana. Pakupedzisira, iyo LO-Basic zvinyorwa irombo kwazvo, kunyangwe muChirungu. Ivo vanofarira kugona LO-Basic, vanogona kutarisa ichi chekare nongedzo kune programmers.
Wakatarisana nedambudziko iri, hapana kwekutiza, chaizvo. Chinhu choga chakasara kusiya kushandiswa kwemacro kana kududzira macro nemaoko, iro rinogona kunge riri basa rakareruka mune macros akareruka kana odyssey chaiyo mune macros akaomesesa.
Haugone kugadzirisa zvinyorwa pamwe chete
Kunyangwe zvakaziviswa makore akati wandei apfuura kuti kuita uku yakanga ichigadzirwa, uye kunyangwe vhidhiyo ine inoshanda prototype yakaverengerwa, nekuda kwechimwe chikonzero chinhu chacho hachina kumbobudirira. Ergo, LibreOffice haisati yave nekwanisi yekushandira pamwe magwaro.
Panguva ino, sarudzo yakanakisa yevashandisi veGNU / Linux ndeyekushandisa Google Docs, Zoho, kana rimwe basa rakafanana regore. Pakati pedzimwe nzira dzemahara zvakakodzera kujekesa OnlyOffice y Etherpad, iyo zvakare inobvumidza iwe kuti ushande zvinyorwa pamwe chete.
Kushaya kwekushanda kana zvikanganiso (bugs)
LibreOffice uye MS Office hazviunze zvakafanana mabasa. Izvi zvinoreva kuti zvimwe zvinhu zvinogona kuitwa muLibreOffice hazvigone kuitwa muMS Office uye zvinopesana. Pamwe, mamwe mashandiro aripo muLibreOffice kupfuura muMS Office, kunyanya muLibreOffice Impress neBase, izvo zvakaenzana neMS Power Point uye Access.
Kuziva izvi zvisingakwanisike kumberi kwakakosha kana uchienda kuLibreOffice. Kuti uone yakazara izere yekuenzanisa runyorwa rweLibreOffice uye MS Hofisi mashandiro ini ndinokurudzira kuverenga iyo Iyo Gwaro Sisekelo wiki. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti dzimwe dzenyaya idzi hadzisi dzakakomba sezvavanoratidzika. Icho chokwadi chekuti LibreOffice Base haina kukwana seMS Access haina basa zvakanyanya kufunga kuti Access pachayo inoonekwa senge yechinyakare dhatabhesi system, yakanyanya kupfuurwa nedzimwe dzazvino uno. Nezve zvikanganiso izvo chirongwa chingave nacho, sezvo iri yemahara software, zvinokurudzirwa taura bug saka nharaunda inogona kuzvigadzirisa.
Izvo zvakakosha kuti udzidze zita rezvirongwa zvinoshanda seimwe nzira kune yega yeMS Office maturusi, pamwe nekuwedzera kwakasiyana kunoshandiswa nekutadza mune yega yega.
Shoko (.doc, .docx) Munyori (.odt)
PowerPoint (.ppt, .pps, .pptx) Kufadza (.odp)
Kuwana (.mdb, .accdb) Nheyo (.odb)
Visio (.vsd, .vsdx) Dhirowa (.odg)
Kufambisa protocol kuenda kuLibreOffice
Iyo Gwaro Foundation, iyo hwaro kuseri kwekuvandudzwa kweLibreOffice, yakagadzirira a kutama protocol kune ino hofisi suite iyo inosanganisira rondedzero yematanho ekutora kana uchitanga nzira yekutama mune chero sangano. Gwaro iri rinokurudzirwa kuverenga.
Isa Microsoft Fonti
Chimwe chezvikonzero nei mamwe magwaro asingatarise zvakafanana muWindows uye GNU / Linux imhaka yekuti mafonti anoshandiswa muWindows haana kuiswa ne default muGNU / Linux. Kunyangwe dzimwe nzira dzemahara dzinouya neGNU / Linux dzakafanana uye, dzimwe dzadzo, kunyangwe nehunyanzvi hwakakwirira, hadzina kufanana.
Kure kumashure muna1996, Microsoft yakaburitsa "web-critical TrueType font package." Aya mafonti aive nemvumo yekutendera, saka chero munhu aigona kuaisa. Kare kumashure Microsoft yaida kuti mafonti avo ave iwo akajairwa typeface kutenderera pasirese, saka vakaisunungura kune avo vaida kuishandisa. Paketi iyi inosanganisira Andale Mono, Arial, Arial Negro, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Impacto, Times New Roman, Trebuchet, Verdana, uye maWebdings mafonti. Rangarira kuti Times New Roman yaive font yemahofisi eHofisi kusvika 2007.
Kuiswa mu Ubuntu uye zvigadzirwa:
Microsoft Yakajeka Rudzi mafonti anogona zvakare kuiswa. Aya masosi ndeaya: Constantia, Corbel, Calibri, Cambria, Candara naConsolas. Calibri yakava font yakasarudzika muMicrosoft Word kubva mushanduro 2007 zvichienda mberi. Nehurombo, Microsoft haina kumboburitsa aya mafonti kuruzhinji, sezvakangoita nema True Type mafonti. Zvisinei, yaisanganisira mafonti aya sechikamu chePowerPoint 2007 Viewer, iyo inowanikwa kuti utore mahara. Kutora mukana weiyi mamiriro ezvinhu, zvinokwanisika kushandisa script inozotora Microsoft's PowerPoint Viewer, kuburitsa iyo Yakajeka Type mafonti, uye nekuiisa pane yako GNU / Linux system.
wget -O vistafonts-simaki http://paste.desdelinux.net/?dl=5152
Usakanganwa kupa mvumo kune iyo faira wobva wamhanya nayo:
sudo chmod + x vistafonts-inosimudzira ./vistafonts-installer
Kuti ushandise aya mafonti akasarudzika muLibreOffice, ingo enda ku Zvishandiso> Zvirongwa uye ipapo LibreOffice Munyori> Basic Fonts, sekuonekwa mune iyo skrini iripazasi.
Uchifunga nezve chiitiko chako seGNU / Linux mushandisi, ndeipi mimwe mibvunzo iwe yaungakurudzira kune vashandisi vari kufunga kutamira kuLibreOffice?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Maitiro ekuita shanduko kubva kuMS Office kuenda kuLibreOffice nyore
Pave nemakore angangoita mashanu kubva pandatamira kuLibreOffice uye ndakabata vazhinji neshanduko. Hunyengeri hwangu hakusi kushungurudza chero munhu.
Kana avo vanoshanda newindo suite vanditumira magwaro, ini ndinovatumira chikamu changu kumashure mune ese mafomati, doc uye odf. Ndinovaita kuti vaone, semuenzaniso, kuti vakareruka sei kushanda mushure mekuve mumaoko angu. Nhaurirano inozvarwa uye ndobva ndavataurira nezve suite yangu, ini ndinovaudza kuti vaiise pamachina avo ane windows kana mac, kuti vaedze, kuve nezvirongwa zviviri uye kuenzanisa kumhanya kwebasa mune imwe neiyi.
Ndakave nezviitiko zvevabatsiri kana vatengi vakasiya suite uye mushure memwedzi mishoma zvakare yevanoshanda OS nekuti vakaona kuti Libre raive rinoshanda, nekukurumidza, uye rakasununguka.
Ah, uye ini handina kumbobvira ndakushungurudza nefilosofi yekudonha kwekuti nei vazhinji vedu tichishandisa yemahara software. Ivo vanoda zvinobudirira kugadzirwa uye zvakare mahara! Mune ruzivo rwangu, haranguing uye kutumira kumisidzana ne windows uye mukufarira GNU linux kubva kune mamwe mativi kunze kwekunyatsogadzira zvibodzwa uye haina kuwedzera.
Pindura kune eneas_e
Kutenda nekugovana ruzivo rwako.
Kubva pane zvakaitika kwandiri, zvinogara zviri nani muLibreOffice kusevha mafaera mune avo akavhurika mafomati uye kungoachengeta iwo muMS Office fomati kana iwe uchida kuatumira kune munhu anoshandisa akadaro hofisi suite.
Kana ikachengetwa kubva pakutanga ine fomati yakavharwa, gwaro rinogona kusiyana kana kupa masitayera / fomati matambudziko pese patinoivhura uye, kunyangwe vachigadzirisa zvikanganiso, vanozoonekazve kana gwaro ravhurwa zvakare muLibreOffice.
Ini ndinogovana zvizere maonero ako.
Chinyorwa chakanaka kwazvo ..
Ndine dambudziko nechinyorwa chemafonti:
bash: ./vistafonts-installer: / bin / sh ^ M: muturikiri akaipa: Faira kana dhairekitori haripo
asi iyo faira iri mufaira ~ /
Iwe unofanirwa kuseta mvumo yekuuraya ne chmod + x vistafonts-simaki.
Kana ini ndikaisa mvumo yekuuraya kune iyo faira .. Zvisinei, ini ndiri kuzozviita neruoko se | emir |
Yakagadziriswa kubva kumahwindo, iwe unofanirwa kubvisa mavara akavanzika anoreva kutyora mutsetse kunoiswa nemawindows. Pane chirongwa chidiki chinoita izvozvo dos2unix. Unovaisa "apt-tora kuisa dos2unix" uye neizvozvo unobvisa iyo ^ M inoonekwa kwauri.
Ini handisi kuwana iyo faira yandinofanira kugadzirisa kuti ndishandise script. Nderipi zita uye mune iro folda ndinoriwana chaizvo?
iyo chaiyo nzira inonzi wps office, ndiyo dombo reMicrosoft office, vazhinji vashandisi vanoshandiswa kune interface ye Microsoft office nekuda kwechikonzero chimwe chete icho chiri nani wps
WPS senzira yeFreeware yakanaka. Senzira yakasununguka, LibreOffice kana OpenOffice ndiyo yakanyanya kunaka.
Yakanaka asi yakanakisa chinyorwa!
emir | akadaro
chinyorwa chakanaka kwazvo chizere nemazano anonakidza
chubhu chinetso nescript saJose, ini handizive kana OS yangu isina hukama asi yakagadziriswa
Ndakaiverenga ndikawana madhairekodhi ekuti utore mafonti emafaira uye nekuaisa nemaoko nema terminal.
Pindura ku | emir |
Panzvimbo yekubatira pamwe, neCalc inoshanda chaizvo, kusvika parizvino haina kunditadza.
Pindura kuna franksanabria
Ichokwadi. Ini ndakakanganwa kutaura kuti naCalc unogona… ini handinzwisise zvavari kumirira kuti vakwanise izvi muMunyori.
Ingori vhiki ino ndakafunga kurega kushandisa Microsoft's suite, iyo iri chaizvo software yakanaka, kuchinjira kumashanduro emahara, izvo zvandave ndichishandisa kwemakore kumba neLinux neWindows. Ndokunge, Thunderbird pachinzvimbo cheOptlook uye LibreOffice panzvimbo yeHofisi.
Nguva zhinji ndakachengeta Hofisi kuti ienderane nemagwaro evamwe vandinoshanda navo nevatengi, asi ndakaona kuti kuchinjana magwaro navo kushoma, uye kushandiswa kukuru ndekwangu, saka handioni chikonzero chekushandisa software yepamutemo iyo ini senge mune zvimwe zviitiko zvakawanda zvine mavambo asina kukodzera.
Kana iri yekuita mushandirapamwe ... zvakadzikama, kana iwe ukandikumbira gwaro ini ndinokupa iwe sarudzo yeODF nekambani, PDF kana Microsoft mafomati akashandurwa neLibreOffice. Izvo hazvisi zvekuita heck, asi ini ndagara ndichinetseka kuti nei maSME mazhinji achishandisa software yekudyara kwechikamu chikuru zvakapusa, uye chimwe chinhu chinofanirwa kupihwa.
Ichokwadi ndechekuti, kukunda kwakanyanya kupfuura Calc, ndakaedza panguva imwechete kushanda pane yekupedzisira asi pandinoshanda nezvakawanda kudarika zviuru zana zvemarekodhi zvakaremberedzwa, zvine mutsindo zvese zvizere uye macro ayo ari nyore kwazvo kuronga, iwe uchazviona mu iyo suite mukuwedzera pakuonekwa kweCalc inoda kugadzirisa zvakawanda kuti iite yakasimba nzira kune hofisi, ndiyo pfungwa yangu yekuzvininipisa.
Pindura kuna angelrell369
Ini ndinofunga zvakafanana. Zvisinei, zvinofanirwa zvakare kutaurwa kuti kunyangwe zvingave zvisiri pamwero weMS Excel, chokwadi ndechekuti 90% yevashandisi havashandise zvinopfuura chikamu chidiki cheicho chirongwa chinopa ... uye LibreOffice inogona kuita izvo "zvekutanga" zvinhu zvine mushe.
Dambudziko iri rinogadziriswa nekumisikidza iyo LibreOffice memory chikamu, iwe unofanirwa kuwedzera kushandiswa kweiyo yakapihwa huwandu hwegondohwe.
Pfungwa mushure me "kutambura" kuitwa kweApacheOpenoffice munzvimbo yangu yebasa.
- Kuvhura gwaro kunotora ka5-6 nguva yakareba pane kutanga neMSOffice. Mhedzisiro yeizvi:
Kana uchizopedza masikati uchinyora iwo iwo mavara, izvi hazvingaratidzika sezvakakosha kwauri, asi ini nevandinoshanda navo tinoshandisa makumi mana muzana yenguva tichivhura nekuvhara mafaera kutarisa mamiriro efaira rega rega tisati tanyora mutumbi. yemavara anovandudza iyo faira.
Isu tinowanzove nevanhu vekunze kuti vatsanangure shanduko yefaira kubva pakutanga, uye muzviitiko zvakawanda inosanganisira kuvapa nhau dzakaipa kwazvo, saka pachinzvimbo chekukwanisa kuvapa nyaya inoyerera uye inoenderana, isu tave kushandisa nguva dzakakura dzekunyarara. pakati penyaya dzakaipa nenhau dzakaipa…
Tine vatungamiriri vanokanganisa "nguva yavo yakakosha" uye vanozvipira kusiya yavo yegirazi-muhofisi vaine maonero akanaka uye chinhu chega chavanobvunza kwatiri ndechekuti isu tinobva tangovapa ruzivo rwavanoda ... Saka shandisa miniti looooong kana miniti nehafu, kana maviri, kana matatu… nekufema kwaboss wako kumusana kwemutsipa wake, hazvifadzi.
Uye ngazvicherechedzwe kuti ini handibate panhau yekudzidzisazve, kuti kana mukuru webasa akati "munhu wese izvozvi neOpenOffice" ipapo takamisidzana uye ndizvozvo, ndiri kutaura nezve nguva yekupindura, chimwe chinhu chisingazogadziriswe. ..
Mune ruzivo rwangu, kunonoka uku pakuvhura nekuvhara mafaera neLibreOffice inonyanya kuoneka nemafaira ari muMS Office fomati (.doc, .docx, .xls, .xlsx, nezvimwewo). Kupesana, pakuvhura vemo LibreOffice mafaera, ivo vanoenda ZVIMWE nekukurumidza.
Saka kurudziro yangu ndeyekushandisa iyo yemahara LibreOffice mafaera, kana zvichibvira.
Kutenda nekugovana, chokwadi ndechekuti ini ndinofunga iwo musoro wakanaka wekuwedzera ruzivo kune mumwe munhu seni, mushandisi wekumba, ndinoshandisa GNU / Linux uye ndiri kufara neakawanda mukana, maturusi nemaapplication ainayo uye neiri Libre Office kwandiri inonakidza sezvo ini ndisingade chimwe chinhu chakakwana!. Semuenzaniso, ini handichafanirwa kuisa mamwe ekuwedzera-kudhinda pdf mafaera, izvo zvakakosha kwandiri.
Ini ndinokurudzira chero munhu anoda kuona ino hofisi otomatiki, hapana chakarasika nekuyedza, pane zvinopesana, yakawanda inowanikwa.
Pindura kuna Chos
Imwe pfungwa yavakakanganwa kutaura nezvechitarisiko… MSoffice inongova nemavara matatu (nhema, bhuruu nesirivheri). Ndichiri muLibreOffice kune mikana isingaperi yekusarudza mavara uye mamiriro ... Uye izvi zvinofadza kwazvo ziso ...
Edza izvi pa:
Zvishandiso - Sarudzo - Kusarudzika - Sarudza theme ...
Chimwe chezvinhu zvakanakisa zve Open Source kugona kushandisa chigadzirwa chemhando yepamusoro seMAHARA uye Mahara Mahara hofisi
Kupatsanurwa kana huwandu hwakawanda hwedzimwe nzira - idzo dzevamwe dzinobatsira - dzinopedzisira dzavhiringa mahara software inotanga, misiyano muchitarisiko, kubata, kutonga, mabhatani, mapfupi uye nevamwe, asi izvo zvinonyanya kushanda uye kuita zvakada kuita zvakafanana chinhu.
Mazana ekuparadzirwa kweLinux mune rimwe nerimwe rematavi, pachinzvimbo chekugadzira hurongwa hukuru, vachizvidza chirevo "kubatana isimba".
Dai chete ivo vakabatanidza pfungwa nekuedza, zvirinani mukuenderana, kufambira mberi kwacho kungave kwakakura. LibreOffice, OpenOffice, KOffice, GnomeOffice, pakati pevamwe, mumwe nemumwe achikwikwidza "kuita zvakafanana" imwe neimwe nenzira yavo, zvakare mukushandisa kusingaverengeke. Vamwe vane nani $ rutsigiro kupfuura vamwe, hazvinyatso kubatsira.
Sechinhu chekubatsira kutama, kana chiri mu linux unofanirwa kuisa iyo PPTVIEW package (unoda waini) kuti ugone kuona ppt uye pps zvine mutsindo, sezvo LO neOO vagadzira lightweight muoni. Kuedza kuona yakawanda yemap * inononoka nguva yega yega kurodha zvese zvinorema Libre / Vhura Impress pane diki uye yakajeka muoni, iyo iri muMSO iripo uye inokurumidza kutakura. Mumawindo ini ndinongoshandisa LO, asi ini ndinoisa Powerpoint muoni, nekuda kwechikonzero chimwe chete
Ndine dhigi yegotsi uye yekukanganisa iyo inopa LO, yakamirira kutumirwa kune vanogadzira
Daniel A. Rodriguez akadaro
Kutanga neLibreOffice 4.4, dzimwe nzira mbiri kuMicrosoft's Calibri neCambria mafonti akawedzerwa. Kuti uvaise chete:
apt-tora kuisa mafonti-crosextra-carlito mafonti-crosextra-caladea
Kana iwe uchida rutsigiro rweWestern Europe mitauro, Turkish, masvomhu zviratidzo uye zvishoma tsigiro yemitauro yeEastern Europe, unogona kuisa iyi package.
apt-tora kuisa ttf-bitstream-vera
Pindura kuna Daniel A. Rodriguez
Pamusoro penyaya yekushandira pamwe pane chishandiso chinonzi Sironta, icho sekuverenga kwandakaita chakavhurwa sosi, kunyangwe ichiita senge ine yemahara uye yakabhadharwa vhezheni, asi inopa kusangana kwakanaka neO Open Source masutu, senge OpenOffice uye MaharaOffice. Ini ndinosiya iyi link kana paine munhu anofarira, ndeye chero chikuva (Windows, Mac OS X neLinux.) Iyi ndiyo url:
Ini pachangu, handina kuzviedza, asi hei, mumwe munhu ane imwe nguva anogona kuzviita uye ndokusiya ruzivo rwavo rwuchiratidzwa uye voona kana zvichipa mhedzisiro.
Ndine mafomu muAccount 2003 uye ndoda kuvhura neWPS Office kuti ungazviita sei?
Manheru akanaka, ini ndinoshandura sei iyo calc faira kuva munyori mune linoux?